देशभर २४ घण्टामा कोरोना संक्रमित थपिए, कहाँ कति ? (विवरणसहित) – ABC NEWS 24
देशभर २४ घण्टामा कोरोना संक्रमित थपिए, कहाँ कति ? (विवरणसहित)
काठमाडौं, ९ पुष । मुलुकमा थप ६ सय १३ जनामा कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ । जस्मा २ सय ३३ महिला र ३ सय ८० पुरुष छन् ।पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार ५ सय १० जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका बिभिन्न भागमा ६ सय १३ संक्रमित थपिएसंंगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या २ लाख ५६ हजार ५ सय ९२ पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप २ सय ४४ जनामा संक्रमण फेला
यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ सय ४४ जना संक्रमित फेला परेका छन् । जस्मा १ सय महिला र १ सय ४४ पुरुष छन् ।योसंगै काठमाडौ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या १ लाख २० हजार ४ सय ७९ पुगेको छ ।
योसंगै काठमाडौंमा संक्रमितको कुल संख्या ९५ हजार ६ सय ५८ जना, ललितपुरमा १४ हजार ९ सय ५२, भक्तपुरमा ८ हजार ७ सय ३९ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ७ सय ३९ निको भए, ५ को मृत्यु
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ७ सय ३९ निको भएर घर फर्किएका छन् ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट ७ सय ३९ जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरुको कुल संख्या २ लाख ४७ हजार ४ सय पुगेको छ । निको हुनेको कुल संख्या प्रतिशतमा ९६ दशमलव ४ रहेको छ ।
त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या ७ हजार ३ सय ८४ रहेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ४ सय रहेको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५ हजार ५ सय १० जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल १८ लाख ९६ हजार २ सय ५० जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालका कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ८ सय ८ पुगेको छ ।
← दु:खद खबर आफू चढेको बसबाट ओर्लने क्रममा पछाडिको चक्काले कि’च्यो, महिलाको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु
अप’राधका बारेमा समाचार लेख्दै आएका एक पत्रकारको ह’त्या →